Italy Archive - Gool FM - page 4	twitter
Sida uu dhigayo calciomercato.it, weerarkan reer Belgian ayaa taxa sare kaga jira laacibiinta ay bartilmaameedsanayso AC Milan, gaar ahaan kaddib markii ay soo bexeen warar 
”Juventus way ka wanaagsan tahay Roma” – Corentin Tolisso
(Roma) 15 Maarso 2017 – Laacibka khadka dhexe ee Olympique Lyonnais ee Corentin Tolisso ayaa rumaysan in ‘Juventus ay tahay koox heer kale joogta’ marka loo eego Roma.
Laacibkan 22-jirka ah ayaa qayb ahaan dafiray warar la isla dhexmarayo oo laacibkan la xiriirinaya Bianconeri kahor kulanka ay fiidnimada Khamiista la yeelan doonaan kooxda Roma ee Europa League.
“Miyaan heshiis kula jiraa Juventus? Ma doonayo inaan ka hadlo, runtu waxay tahay inaan ahay laacib Lyon haatan ka tirsan oo qandaraas kula jira ilaa 
Inter Milan oo €40m ku doonaysa Federico Bernardeschi (Xaaladda laacibka & Viola oo murugsan)
(Firenze) 15 Maarso 2017 – Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Inter Milan ay cagta cagta u saarayso xaaladda ku xeeran wada hadalka dhanka qandaraaska ee Federico Bernardeschi iyo Fiorentina.
Sida uu dhigayo La Nazione, wada xaajoodyada labada dhinac ayaa gidaar herdiyay ka gadaal markii uu laacibkani ku adkaystay inaanu diyaar u ahayn inuu shuruudo cusub ku xiro qandaraas cusub oo uu kooxdiisa u saxiixo.
Haddaba, jeer garab-weerarka Nerazzurri ee Ivan Perisic lala xiriirinayo Manchester United, ayuu warsidahani qorayaa in ay Bernardeschi 
Derby Milano oo China lagu qabanayo xagaagan!
(Milano) 15 Maarso 2017 – Kooxaha Inter iyo Milan ayaa kulankooda derby Milano xagaagan la aadi doona dalkaasi China oo ay kaga qayb geli doonaan ee International Champions Cup.
Sida uu faafinayo La Gazzetta dello Sport kulankan ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo 24-ka Luulyo oo ay camaaliqooyinkan reer Talyaani ku loollami doonaan gegada Olympic Stadium ee magaalada Nanjing, oo ah garoon ay leedahay Jiangsu Suning – oo ay iska leedahay isla Sunnin oo ah shirkadda iska leh Inter Milan.
Arrintan ayay caqabadi 
Buffon oo aan rabin in uu ka horyimaado Leicester
(Juventus) 15 Mar 2017. Goolwalaha Juventus Gianluigi Buffon ayaa ku tilmaamay Leicester City kooxda sadaasha Champions League-ga leh marka laga yimaado kuwa waa weyn ee la fahansan yahay kaddib markii ay sideed dhamaadka u soo gudubtay salaasada.
Hore waxaa u soo baxay Barcelona, Real Madrid iyo Bayern Munich, balse 38 jirrka waxaa hada cabsi galisay kooxda reer England ee tartanka ku cusub.
“Yaan door bidayaa in aan la dheelin? Leicester, maxaa yeelay waa halis waana kuwo muxubo leh oo dhibaato u keeni kara 
Dybala: Barcelona ayaan ku rabaa fiinaalaha Champions League-ga
(Turin) 15 Mar 2017. Weeraryahanka Juventus Paulo Dybala waxa uu jeclaan lahaa in uu Fiinaalaha ku aado Barcelona oo ah celiska kama dambeystii Champions League-ga ee 2015.
Juventus waxa ay 3-0 isku darka goolasha labada lug uga soo baxay Porto waxa ayna gaartay sideed dhamaadka Champions League-ga.
Dybala oo uga soo biiray Juve kooxda Palermo inta uusan bilaaban 2015-16, ayaa sheegay in uu is ka horimaad kooxda reer Spain uu ahaan doono mid cajiib ah, laba sano iyada oo laga joogo fiinaalahaas.
Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain oo ku soo biiray kooxaha doonaya difaaca Napoli ee Faouzi Ghoulam
(Naples) 13 Maajo 2017 – Kooxaha Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay ku soo biireen xusul duubka loogu jiro saxiixa difaaca Napoli ee Faouzi Ghoulam.
26-sano jirkaan kaasoo sidoo kale la la xiriirinayey kooxda Premier League ee Manchester City ayaa Napoli kaga soo biiray naadiga Saint-Etienne xagaagii 2014 waxaana uu u saftay in ka badan 100 kulan kooxda reer Talyaani tartammada oo dhan.
Dambeedkan buuxa ayaa qandaraaskiisa waxa uu ka dhacayaa dhammaadka ololahan 2017-18, si kastaba, waxaa la 
SARIE A: Inter Milan oo si wayn u soo nooleysay rajadeeda Champions League kaddib markii ay cashar u dhigtay Atalanta iyo kulamadii kale ee la ciyaaray… + SAWIRRO
(Milan), 12 Maarso 2017 –Waxaa galabta la ciyaaray kulammo ka tirsan cayaarihii 28’ ee Serie A-da Talyaaniga, waxaana ugu xiiso badnaa kulankii Inter ay 7-1 ugu karti sheegatay kooxda Atalanta.
Fagtii horeba waxaa goolal lala gaaray kooxda Atalanta, waxaana Inter saddex goo loo xiriir ah u dhaliyay Mauro Icardi daqiiqadihii 17’ 23’ (gool ku laad) iyo 26’.
Intaa looguma ekeyn Atalanta e waxaa laba goo loo kale Inter u dhaliyay Ever Banega daqiiqadihii 31’ 34’ waloow Atalanta halka gool ee qura 
”Laga yaabee inay wada waalan yihiin naadiyada Napoli, Milan iyo Inter” – Maurizio Sarri oo u qariyay kooxda Juve
(Napoli) 12 Maarso 2017 – Macallinka kooxda SSC Napoli ee Maurizio Sarri ayaa isagoo ka hadlayay shirka jaraa’id ee aalaaba ka horreeya ciyaarta rasmiga ah oo ay markan ku wahayaan Crotone wuxuu ka hadlay fikirkiisa kulankii Jimcihii ee Juve-Milan.
Kulankan muranku ka dhashay ayaa waxaa kasii horreeyay muranno ka dhashay kulamadii Napoli iyo Inter iyadoo kooxda dambe xitaa laacibiin laga ganaaxey.
“Ma ogi inay jiraan 3 naadi oo wada waalan iyo in ay jiraan guulo su’aalo ku jiraan oo soo baxa kulamada 
Juventus oo 40 milyan oo euro xagaaga u diyaarisay Corentin Tolisso
(Torino) 12 Maarso 2017 – Juventus ayaa sida lasoo werinayo €40m waxay ku raadinaysaa adeegga laacibka khadka dhexe ee O. Lyon ee Corentin Tolisso.
Laacibkan 22-jirka ah ayaa kusoo baxay da’yarta kooxdaasi, isagoo safka 1-aad ee kooxda waawaynka ah ka tirsanaa tan iyo 2013, iyadoo sida laga werinayo Tuttosport, bandhiggiisu uu soo jiitey Bianconeri oo muhiimadda 1-aad u aragta suuq xagaagan.
Juve ayaa la sheegayaa inay horay Tolisso bishii Jannaayo ugu geed fariisteen madaxwaynaha Lyon ee Jean-Michel Aulas oo u sheegay inuusan 